Barcelona oo lagu jiid jiiday garoonka Olympico iyo Man City oo la maqaar siibay – Gool FM
Barcelona oo lagu jiid jiiday garoonka Olympico iyo Man City oo la maqaar siibay
Kaafi April 10, 2018
(Rome) 10 Abriil 2018. Kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa taarriikh lama ilaawanna ku dhigtay Barcelona kulankii lugta labaad ee Champions League sideed dhammaadiisa.
Ma jirin cid hadal haysa kulankaas balse hadda qof walba ayaa hadal haya kaddib markii ay ka soo laabatay natiijo aysan cidina ka fekerin in ay dhici doonto in laga soo laabtay siiba marka kooxdu tahay Barcelona -tani waa casharada laga barto kubadda cagta.
Roma waxa ay goolasha daah furtay daqiiqaddii lixaad ee qeybtii hore waxaana u dhaliyey Bosnian-ka Edin Dzeko.
Qeybtii labaad markii la’isku soo laatay ayaa waxaa goolka labaad daqiiqaddii 58-aad u labeeyey Barcelona Daniel De Rossi halka uu guusha siiyey Roma Konstantinos Manolas daqiiqaddii 88-aad.
Sidaas ayey natiijadda ciyararta ku noqotay 4-4 oo ay Roma ugu soo baxday goolka banaanka afar dhammaadka Champions League.
Liverpool waxa ay si fudud u maqaar siibtay Manchester City isla kulankii lugta labaad ee Champions League iyada oo markale garaacday kooxda uu leyliyo Pep Guardiola.
Daqiiqaddii labaad waxa ay u muuqatay in wax walba u hagaagayaan City kaddib markii ay dar dar ay dheesha ku bilowday ku heshay goolka kowaad oo uu sallaxay Raheem Sterling kaddibna dhaliyey Gabriel Jesus.
Qaybtii labaad, waxaa Liverpool daqiiqaddii 56-aad waxaa uu gool u muhiim ah u dhaliyey Mohamed Salah kaddib markii uu Sadio Mane ku dhex tuurtay daafacyada Man City.
Roberto Firmino ayaa daqiiqaddii 77-aad u labeeyey Man City goolkaas oo si rasmi ah maqaarka uga diiray kooxda ku dheesha Etihad.
Liverpool iyo Roma waxa hadda sugayaan kooxaha berri u soo gubta afar dhamaadka Champions League iyada oo ay dheeli dooonaan Bayern Vs Sevilla iyo Real Madrid Vs Juventus.
FA-ga ingiriiska oo gabi ahaanba baabi'iyay casaankii la siiyay Mohamed Elneny